कहालीलाग्दो छ नारीको पीडा | Nepal Ghatana
कहालीलाग्दो छ नारीको पीडा
प्रकाशित : २४ फाल्गुन २०७८, मंगलवार २३:०८
मंगलबार नारी दिवस मनाइरहँदा पीडित नारीहरुको पीडा भने जस्ताको त्यस्तै छ। लक्ष्मी पूजाकै दिन श्रीमानको तेजाव आक्रमणमा परेर अनुहार गुमाएर घाइते जीवन बिताइरहेकी आरतीदेखि बलात्कार पीडित महोत्तरीकी निहारिकासम्मको पीडा कहाली लाग्दोछ ।
जनकपुरधामकी २६ वर्षीया आरती साहमाथि २०७७ कार्तिक १९ गते श्रीमानले एसिड प्रहार गरे । दोषीलाई सजाय त भयो तर एसिडले शरीरमा दिएको घाउ र मानसिक पीडा ताजै छ । एकातिर उपचार खर्चको अभावमा तड्पिनु परेको छ भने अर्कोतिर समाजको अपहेलना ।
कुमारी आमा भनेर चिनिने महोत्तरीकी निहारिका राजपुतको कथा पनि कम पीडादायी छैन । निहारिकाले आफुमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका ५ महेन्द्रनगरका शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा हाल्नुभयो ।
तर आठ वर्षपछि धनुषा जिल्ला अदालतले गत माघ २४ गते बलात्कार नभएको भन्ने फैसला सुनायो । न्यायको खोजीमा भौतारिएकी निहारिकाको जीवन यो फैसलासँगै निरस बनेको छ ।
आरती र निहारिकालाई मात्रै होइन, समाजमा स्थापित महिलाहरुलाई पनि महिला भएकै कारण काम गर्न चुनौतिपूर्ण छ ।
मधेसी समुदायमा दाइजोका कारण महिलाले हिंसा भोग्नु परेका घटना प्रशस्तै छन् । त्यसमाथि बलात्कार र एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराध भइरहेका छन् । कति घटना लुकाइन्छन् भने कतिपयमा महिलाले न्याय नै पाउँदैनन् । बरु पीडामाथि पीडा थप्ने काम भइरहेको छ ।
पुरानै झन्झट यसपटक पनि दोहोरियो मतगणनामा !
के थियो निर्णय नम्बर ९६२३ ?, जाहेरी नै नपर्दा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यो निर्णय
कुन पार्टीले कति जिते ?
पुरानै झन्झट यसपटक पनि दोहोरियो मतगणनामा ! राष्ट्रिय
नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक गर्ने युवतीको घरमा प्रहरी, काउन्सिलिङ गर्दै राष्ट्रिय
ईतिहास बोकेको एभर्टन रेलिगेशनबाट बच्यो खेलकुद
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अफताव आलमका छोरा मेयरमा निर्वाचित राष्ट्रिय